Banaanbax looga soo horjeedo Wargeyska Charlie Hebdo oo maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho - iftineducation.com
iftineducation.com – Banaanbax looga soo horjeedo Wargeyska Charlie Hebdo, ayaa waxaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho, iyadoo ay isugu soo baxeen qaar ka mid ah bulshada ku nool Caasimada.
Wargeyska, ayaa wuxuu markale daabacay kartoon uu ku aflagaadeynaayo Nabi Muxamed (NNKH), waxayna taasi in Muslimiinta ay si caro leh kaga jawaabaan.
Dadkii isugu soo baxay banaanbaxa, ayaa waxay ka dhiidhiyeen aflagaadada uu Wargeyskaasi u geystay Suubanaha, waxayna bulshada reer Muqdisho muujisay inaan la aqbali karin falalka ceynkaasi oo kala ah.
Banaanbaxayaasha, ayaa Wadamada Reer Galbeedka ugu baaqay inay joojiyaan taageeradooda la xiriirta Wargeyska Charlie Hebdo, si aynaan hujuum ugala kulmin Ummada Muslimiinta.
Reer Galbeedka waxaa loogu baaqay inaysan kicin dareen Ummada Muslimiinta, taasoo hadhow qal-qal ku keeni doonto dalalka xasiloonida ka jirto ee Reer Galbeedka.
Banaanbaxyo rabshado wata, ayaa gil gilay Magaalada Zinder ee dalka Niger. Dadweyne careysan ayaa xoog ku galey saddex Kaniisadood oo Magaaladaasi ku yaala, sidoo kale waxay burburiyeen xarun dhaqameed uu Faransiisku ku lee yahay Zinder.
7-dii bishaan, ayay ahayd markii weerar qorsheysan lagu qaaday Xarunta Wargeyska Charlie Hebdo, waxaana halkaasi lagu dilay in ka baan sideed Suxufi, oo ka hawlgaleysay Wargeyskaasi.
Markab Dagaal Oo la siiyay Soomaaliya -Muuqaal